ဘဝမှာမီးဖွား စရိတ်လှူဘူးတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မို့ အရမ်းပျော်တယ်လို့ဆိုပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – Cele Snap
ဘဝမှာမီးဖွား စရိတ်လှူဘူးတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မို့ အရမ်းပျော်တယ်လို့ဆိုပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
May 31, 2021 By Ju Ry Celebrity
သူမရဲ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်လှူဒါန်းတဲ့ ကုသိုလ်အလှူလေးကြောင့် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ တော်တော်များများ ရိုက်ကူးခဲ့ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ (၂၀၁၈) ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ရွှေကြိုအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ရာကနေ ပရိသတ်တွေပို သတိထားမိပြီး အားပေးဝန်းရံသူတွေ များပြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် လူတိုင်းကို ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံတတ်သူလေးမို့ ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
အလှူအတန်း တွေ ဆိုရင်လည်း ရှေ့ဆုံးကနေ ပါဝင် တတ်တဲ့ ဆောင်းယွန်း ကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပြည်သူတွေအတွက် အလှူလေးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ပြုလုပ်ပြီး အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတာလည်း ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ အခုလည်း သူငယ်ချင်းနဲ့စုပေါင်းပြီး မီးဖွားရန် အတွက် စရိတ် လိုအပ်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တစ်ဦးကို အလှူငွေ နှစ်သိန်း လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဝေမျှလာပါ တယ်။
အလှူလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” ဒီညလေးအတွက် အရမ်းကိုပီတိဖစ်လို့တင်ပါရစေ..လူ့လောက ထဲကို ရောက်လာ တော့မယ့် သမီးလေးအတွက် မီးဖွားစရိတ်လေးလှူဒါန်းဖစ်ခဲ့တယ်..ဆောင်းနဲ့ May Chit Thway. တယောက်တသိန်းစုပိးလှူလိုက်တာပါ..အများကြီးမဟုတ်ပေမယ့် နိုင်သလောက်အလှူလေးပါ.. ဘဝမှာမီးဖွား စရိတ်လှုဘူးတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မို့ အရမ်းပျော်တယ်.. သမီးလေးကိုလဲ အရမ်းတွေ့ချင်နေပါပိ.. ဆောင်းသမီးပေါ့နော် ဆောင်းသမီးလေးအတွက် ကျန်းမာဆုတောင်း စကားလေးတွေပြောပေးဦးနော်” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်။
သူမရဲ့ဘဝမှာ ပထမဆုံးအကွိမျလှူဒါနျးတဲ့ ကုသိုလျအလှူလေးကွောငျ့ ဝမျးသာပီတိဖွဈနတေဲ့ ဆောငျးယှနျးစံ
ဆောငျးယှနျးစံ ကတော့ သရုပျဆောငျ မျောဒယျ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ ဖွဈပွီး ဗီဒီယို ဇာတျကားတှေ တျောတျောမြားမြား ရိုကျကူးခဲ့ တာလညျး ဖွဈပါတယျ ။ (၂၀၁၈) ခုနှဈ အကယျဒမီပေးပှဲမှာ ရှကွေိုအဖွဈ ပါဝငျခဲ့ရာကနေ ပရိသတျတှပေို သတိထားမိပွီး အားပေးဝနျးရံသူတှေ မြားပွားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ လူတိုငျးကို ဖျောရှစှော ဆကျဆံတတျသူလေးမို့ ပရိသတျတှေ အခဈြပိုနရေတာလညျးဖွဈပါ တယျ။
အလှူအတနျး တှေ ဆိုရငျလညျး ရှဆေုံ့းကနေ ပါဝငျ တတျတဲ့ ဆောငျးယှနျး ကတော့ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေေ မှာလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပွညျသူတှအေတှကျ အလှူလေးတှေ မကွာခဏဆိုသလို ပွုလုပျပွီး အားလုံးနဲ့အတူ ရပျတညျနတောလညျး ပရိသတျတှေ မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။ အခုလညျး သူငယျခငျြးနဲ့စုပေါငျးပွီး မီးဖှားရနျ အတှကျ စရိတျ လိုအပျနတေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ တဈဦးကို အလှူငှေ နှဈသိနျး လှူဒါနျးဖွဈခဲ့ကွောငျး ဝမြှေလာပါ တယျ။
အလှူလေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ” ဒီညလေးအတှကျ အရမျးကိုပီတိဖဈလို့တငျပါရစေ..လူ့လောက ထဲကို ရောကျလာ တော့မယျ့ သမီးလေးအတှကျ မီးဖှားစရိတျလေးလှူဒါနျးဖဈခဲ့တယျ..ဆောငျးနဲ့ May Chit Thway. တယောကျတသိနျးစုပိးလှူလိုကျတာပါ..အမြားကွီးမဟုတျပမေယျ့ နိုငျသလောကျအလှူလေးပါ.. ဘဝမှာမီးဖှား စရိတျလှုဘူးတာ ဒါပထမဆုံးအကွိမျမို့ အရမျးပြျောတယျ.. သမီးလေးကိုလဲ အရမျးတှခေ့ငျြနပေါပိ.. ဆောငျးသမီးပေါ့နျော ဆောငျးသမီးလေးအတှကျ ကနျြးမာဆုတောငျး စကားလေးတှပွေောပေးဦးနျော” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါ တယျ။
အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီး ဒေစီကျော်ဝင်းထံ အလှူငွေနဲ့စားစရားများကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်လို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားရင် SHOW ပွဲတွေပြန်လာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း